I-China Factory Direct Sale Round Drill / Square drill Creative DIY Diamond Painting Home Decoration New Design Pattern Diamond Art Painting12006 Umkhiqizi nomhlinzeki | Yazisa
Isitolo esidayisa yonke impahla Custom Decor Izimbali Zasendulo Isithombe DIY Drill Okugcwele Rhinestone 5D Diamond Painting nge Uzimele.
Ukudweba Okugcwele Kwedayimane: Isizukulwane esisha ikhava egcwele yedayimane engu-DIY yonke indwangu,
kugcwele idayimane efekethisiwe imishini yokudweba idayimane eligcwele eliyindilinga, amakethi okupenda-ngenombolo wezingane zabantu abadala
Ubuhlalu obungama-30% Okuningi: Ubuhlalu bekhwalithi enhle bubukeka bucwebezela futhi abusoze bufiphala, buqine ngokwengeziwe. Umdwebo wedayimane ophelile ungagcinwa iminyaka engaphezu kwengu-20. Iphelele ukuhlobisa igumbi lakho lokuphumula noma igumbi lokulala.
Amathuluzi Ahlanganisiwe: Indwangu yokudweba ecacile engangeni manzi nayo yonke ithuluzi lokudweba idayimane olidingayo, kufaka phakathi ubuhlalu bemibala ehlukene, iglu, ipeni, nepuleti lokuprakthiza.
Izinyathelo Zokukhiqiza ze-DIY: Okokuqala beka amadayimane afanayo kuthileyi, bese uthatha okufakwayo "kwepeni" kokunamathiselwe kwesikwele kancane, shiya okunamathelayo epeni, ekugcineni uthathe idayimane ulibeke kunombolo ehambisanayo kuseyili.
Isipho Esihle: Umdwebo wedayimane we-DIY ungasebenza futhi ufunde ukunciphisa ukucindezeleka, ukulungiswa kwemizwa, ukucabanga okusebenzayo, ukukhulisa ukuzethemba.
Ukukhiqizwa kwe-DIY kungathola umuzwa wokufeza, ikhono nokubekezela kuhlakulela ukubekezela. I-DIY yokudweba idayimane ilungele ukunikeza abangani nabathandekayo ukuveza izifiso ezinhle zokwabelana.
1. I-resin diamond ayidleki, ungavumeli izingane zidlale ukuze zigweme izingozi njengokugwinya.
2. Ukudweba kudinga ukugcinwa kuhlanzekile, Uma kungenjalo, amandla okunamathela ayathinteka. Uma kukhona ukunamathela kokungcola kungabathonya ngensimbi eqinile enezinga lokushisa eliphansi.
3. Amadayimane ahlala anengqinamba yezinsini.
Naka: Uma kukhona okomile kancane lapho kudwetshwa, kungaba ngamaconsi ayi-1 kuya kwangu-2 wokukhanya noma amanzi (awasekho amaconsi) kupende, uvuse kahle ngemuva. Ngokushesha okukhulu kuqediwe ezinyangeni ezi-1 ukuya kwezi-2 ngemuva kokuvula i-sketchpad. Uma isikhathi siside kakhulu, imigqa izobe ingajulile ekuthikamezeni umdwebo.
Langaphambilini I-Factory Direct Sale Round Drill / Square drill Creative DIY Diamond Painting Home Decoration New Design Pattern Diamond Art Painting12001
Olandelayo: I-Factory Direct Sale Round Drill / Square drill Creative DIY Diamond Painting Home Decoration New Design Pattern Diamond Art Painting12007